Ndị ohi na-atọ ọchị ị ga-enye na nnọkọ oriri na ọ Funụ --ụ Crafts Na
Ndị ohi na-atọ ọchị na-enye oriri na nnọkọ
Alicia tomero | | Crafts, Crafts maka ụmụaka, Nzughari
Ndị ohi a bụ ezigbo echiche inye onyinye na mmemme ma ọ bụ oriri. Ga-achọ naanị ole na ole ogwe osisi, katọn ojii na mkpụrụ ego chọkọletị ụfọdụ iji bụrụ akụkụ nke ahụ onyinye pụrụ iche maka ụmụaka. Ọ bụ ọrụ dị mfe nke enwere ike ịrụ ọrụ na obere, mana jiri nlezianya nke ukwuu ka ọkụ nke silicone ghara imebi ya. I nwekwara ihe ngosi vidio iji hụ ya site na nzọụkwụ.
1 Ihe m jiri maka ndi ohi abuo a:
2 Nzọụkwụ mbụ:
3 Nke abụọ:
4 Nzọụkwụ nke atọ:
5 Nzọụkwụ nke anọ:
6 Ise ise:
7 Nzọụkwụ isii:
Ihe m jiri maka ndi ohi abuo a:
10 osisi osisi
2 anya buru ibu maka nka
Ihe nrịba ama ojii
White Tipex ma ọ bụ pen welara ọcha
Mkpụrụ ego chocolate
Hot silicone na egbe ya
Nwere ike ịhụ nka nka site na nzọụkwụ na vidiyo na-esonụ:
Anyị na-ewere osisi anọ ma debe ha ọnụ ma kwekọọ. Anyị na-ebipụ osisi ọzọ na ọkara ma jiri ya nwee ike isonyere osisi 4 ndị ọzọ. Anyị ga-eji silicone nwee ike ịrapara ya ma anyị ga-eji otu mpempe akwụkwọ ọ bụla na nsọtụ ọ bụla.
Anyị na-etinye kaadiboodu ojii n’elu osisi iji nwee ike ịme nha na ịnwale ịme akwa ojii nke dị ihe dị ka 2 cm elu. Anyị na-eme ma bee ibe 2. Anyị na-etinye warara n'elu kaadiboodu ma jiri compass na-emegharị udi okirikiri nke okpu. Iji mee ka ọdịdị okirikiri ahụ pụta ìhè, anyị ga-adọta akụkụ nke gburugburu ahụ n'ụzọ mechiri emechi na anyị ga-ebipụ abụọ ọgụgụ.
Nzọụkwụ nke atọ:
Anyị na-ejikọta akụkụ ahụ nke okpu na anyi bepuola site na ngwa oji. Anyị ga-edebe anya plastik n'otu akụkụ nke ihu na ya na pensụl anyị ga-ese ihe nkedo nke ọzọ anya, ibe patch, imi na ọnụ.
Nzọụkwụ nke anọ:
Na a akara ojii Anyị na-akara ma na-adọta akụkụ ndị dị na oji na nke anyị ji pen mee ihe: nkedo anya na imi. Anyị na-agabiga ọnụ na acha uhie uhie.
Anyị na-ewere Mkpụrụ ego chocolate anyị na-arapara ha na silicone n'akụkụ ala nke ihu onye pirate. Anyị na-ewere akara ọcha ma ọ bụ tipex na akụkụ elu nke okpu anyị ga-ese ụdị okpokoro isi na ọkpụkpụ.
Anyị na-ese pensụl aka na kaadiboodu ojii. Anyị na-egbutu ha ma tinye ha na mkpụrụ ego ahụ na mmetụta nke ịmakụ ha. Anyị na-arapara ya na silicone na-ekpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Ndị ohi na-atọ ọchị na-enye oriri na nnọkọ
5 origami iji akwukwo mposi na ihe ijuanya mee
Grazọ ahihia maka igwu mmiri